Te ho sitrana va ianao? (Jaona 5:6)
Ry Kristiana havako, ho aminareo mandrakariva, eny ho aminareo isam-batan’olona ny herin’ny Fanahy Masina hitarafan’ny Tenin’Andriamanitra aminareo ka hahazoanareo ny hery rehetra hanaovana ny sitrapony. Amena.
Teny anankiray nataon’i Jesoa Kristy tamin’ilay narary nandritra ny 38 taona. Hitany nandry teo amoron’ny farihy mba te-hiroboka ao anaty farihy ka handray ny fanasitranana no vatsy ho antsika anio.
Io teny io dia hitanareo eo amin’ny Filazantsara araka ny Jaona 5 ka ny tapany farany eo amin’ny and 6.
Izao no tenin’i Jesoa Kristy, ary raiso koa ry Kristiana amin’izao fotoana izao, amin’ity minitra ity, hoy ny Tompo tamin’io marary io : “Te-ho sitrana va hianao?”
Ry Kristiana havako, ny tenin’Andriamanitra dia teny misy hafatra. Ny tenin’Andriamanitra dia tsy teny ho an’ny tantara efa lasa fa ho an’ny ankehitriny koa. Angamba ato anatin’ity Fiangonana ity misy olona marary ankehitriny. Narary nefa mbola afaka mandeha ihany, taizan’aretina. “Te-ho sitrana va hianao ?” Mafy ny marary ry havana, efa nandia an’izany aretina izany isika, ary izaho ao anatin’izany ihany koa. Mafy ny marary satria ny sainao te-hanao zavatra maro tokoa fa noho ny aretinao, voageja ianao, voatana ianao, tsy afa-mandeha ianao. Manavesatra ny fiaraha-monina koa ny marary. Vesatra ho an’ny fianakaviana, manimba ny fifaliana ny aretinao ary mandrava ny fifandraisana.
1-TE HO SITRANA VE IANAO ?
Ary ndeha isika hitodika amin’ity marary ity ary sokafy ny Baibolinao fa misy zavatra tsy ho takatra mihitsy ao raha tsy hazavaina. Jaona 5 ary handeha haverina hovakiana ny and. 3. Ho gaga ianareo satria rehefa vakiana ny andininy 3 dia io hitanareo io ary raha mamaky ny manaraka ianareo dia avy hatrany dia ny andininy 5, tsy ao ny andininy 4. Tsy fantatro aloha raha nahamarika izany izay namaky ny Baiboly. Ka hovakiako ny andininy 3 ary hovakiako koa ny andininy 4 izay ery amin’ny vodin’ny pejy ery satria tsy hitanareo eo amin’ny texte ilay izy raha tsy izany tsy mazava io tenin’ny Soratra Masina io: “Tao no nandrian’ny marary maro, ny jamba, ny mandringa, ny mati-ila miandry ny fihetsehan’ny rano. Fa nisy anjely nidina tany amin’ny farihy indraindray ka nampihetsika ny rano; koa izay iray niroboka aloha, rehefa nihetsika ny rano dia sitrana na inona na inona no aretina nanjo azy.” Ka mafy ny nanjo ity lehilahy ity satria noho izy malemy rehefa mihetsika ny rano dia voalazany ao tsara fa tsy afa-mihetsika izy, ary raha mba te-handeha izy dia misy olona misosoka eo anoloany. Mafy ny manjo ny olona marary satria tsy misy mpijery, songonan’ny olona, tsy raharahahin’ny olona. Eo no mipetraka ny fanontanian’i Kristy : “te-ho sitrana va hianao ?” Mety misy amintsika hieritreritra hoe Jesoa Kristy koa dia mbola manatsafa ihany, hita izao fa efa marary ka mbola anontaniana ihany hoe :“te-ho sitrana va hianao ?”Azafady ry havana, fa misy anie marary tsy ho sitrana e ! Ny aretina rehetra izay manjo antsika, manjo ahy sy ianao, tsy ny aretin’ny nofo ihany fa ny aretina rehetra na ny aretim-panahy, na ny aretin’ny saina, moa “te-ho sitrana va hianao ?” Be ny are-tintsika : fitiavan-tena, fialonana, fahazaran-dratsy, alahelo mikiky ao anatinao, hakamoana “te-ho sitrana amin’izany va hianao ?” Ity farihy ity dia mitondra ny anarana hoe Betesda. Raha adika amin’ny teny Malagasy izany hoe Betesda izany dia “tranon’ny famindram-po”. Io farihy io no amindran’Andriamanitra fo ny olona ka sitraniny ao ny aretina. Ahatsiarovako Kristiana mpitsabo iray nametraka soratra teo amin’ny varavaran’ny trano fitsaboany manao hoe : “Izaho mitsabo, Andriamanitra no manasitrana anao” “Te-ho sitrana va hianao ?”
2-NY HAFATR’I JESOA KRISTY
Ry Kristiana havako, amin’ity tenin’ny Tompo ity, dia misy zavatra azontsika takarina. Ny dikany voalohany dia izao : fantany fa marary ianao, manana aretina ianao. Hoy Jesoa : Izaho afaka manasitrana anao, fa manaiky ho sitraniko ve ianao ? Tianao mihitsy ve ny ho afaka amin’-io ratram-ponao io ? Amin’io alahelonao io ? Amin’io fahazaran-dratsinao io ? Amin’io aretinao io ? Tsaroako nisy Diakona iray izay niteny tamiko hoe : “ny zavatra rehetra dia resiko avokoa fa misy zavatra iray izay tsy mety resiko mihitsy.” “Inona no tsy resinao hoy aho”. “Ity sigara ity no tsy mety resiko mihitsy”. Dia hoy aho taminy: “Ianao ve anefa te-hiala tokoa ?” Hoy izy tamiko : “Izany hoe raha mety aloha dia aleo amin’ny herintaona e !” . Efa hitanao izao ve fa manimba dia mbola hiandry amin’ny herintaona indray ! Izay ilay tsy te-ho sitrana. Milaza ianao fa tsy mety afakao io nefa ianao mihitsy no tsy te-hiala.
Ry Kristiana havako, mazava tsara ny tenin’i Jesoa Kristy, teo isika nandray Azy hoe izao dia izao raha tianao. Misy dikany koa izany hoe teo isika nandray Anao. Ny dikan’izany dia izao Kristy eo manasitrana anao, fa ny fanasi-tranana anao tena miankina aminao. Tsy dokotera aho fa tokony hanaraka ny toro-hevitry ny Dokotera ianao rehefa mankany aminy : “ianao a ! aza dia mihina-menaka loatra”. Ianao anefa manao hoe asio kely aloha anio fa rahampitso mifady e ! Tsy te-ho sitrana anie izany olona izany e! mankany amin’ny dokotera izy nefa tsy te-ho sitrana. Ry havana malala, “te-ho sitrana va hianao ?” Averin’ny Tompo io, tsy manatsafa Izy fa eo am-pelatànanao ny fanasitranana anao ry Kristiana havana raha tianao. Sahy milaza aminao aho fa ny ankamaroan’ny marary dia marary noho ny ataony ihany, noho ny hadalany ihany noho izy tsy te-ho sitrana.
Eo vao mazava amintsika ny tenin’ny Tompo amintsika, vonona Jesoa Kristy hanasitrana anao fa ianao vonona ve ? Ry Kristiana havako, raha jerentsika ny tantara amin’ity andininy ity dia niteny Jesoa Kristy tamin’ilay marary hoe: “mitsangana, ento ny fandrianao ka mande-hana” Hamaranako ny toriteny:
-Mitsangana: izany hoe raha te-ho sitrana ianao dia araho ny baikon’ny Tompo, tanteraho ny didiny dia ho sitrana ianao. Aza ny herinao no ianteherana hoe izaho ve dia afaka hitsangana ? fa mitsangàna, bedao ny fandrianao
-Ento ny fandrianao : asa raha azonareo ry havana izany sary izany. Raha ny tena marina mantsy dia ny fandriana no mibata ny marary, izany no sary amin’ny andava-nandro. 38 taona dia ny fandriana no nibata azy fa eto dia batao ny fandrianao.
Ry Kristiana havako, ny dikan’izany dia izao, isika no tian’ny Tompo hibata ny aretintsika fa tsy ny aretintsika no hibata antsika. Aza manaiky ho resin’ny ratsy, aza manaiky ho resin’ny gejageja rehetra fa io mangejageja anao io batao io ka esory amin’ny anaran’ny Tompo. Ary izany no ataon’ny mpiandry e ! “mialà ny devoly, mialà ny aretina, mialà ny fakam-panahy, mitsangana ka tohero io, batao io fa resinao.
“Te-ho sitrana va ianao ?”
Mandehana: izany hoe : mandehana lazao amin’ny manodidina anao, lazao amin’ny rehetra izay manodidina anao fa misy olona nanasitrana anao dia Jesoa Kristy. Amena!
FJKM Ambohimanoa Alasora.
Mofonaina anio Sabotsy 16 Febroary 2019